साउन ३०, २०७८ शनिबार 38
सामाजिक सञ्जालमा युवायुवतीहरुको क्रेज बढ्दो छ । आफ्ना दैनिक जीवनमा भएका हुने गरेका घट`ना तथा विचार पोख्ने गतिलो माध्य`म सामाजिक सञ्जाल बनेको छ ।पछिल्लो समय टिकटक युवा हरु माझ लोकप्रि`य बनेको छ । के युवा के केटा केटी के वृद्धा सबै जना टिक टक भिडियो बनाउन लोभिएका छन् ।
कतिले त टिक टक मार्फत नै आफ्नो करिय`र लाई फिल्मी क्षेत्र तथा मोडलिङ मा स्थापित स`मेत गरेका छन् ।यस्ता प्ल्याट फर्म मा राखिएका कुन भिडियो कुन समयमा चर्चित हुन्छन् स्वयं सर्जक लाई समेत भेउ हुँदैन । टिक टक मा हालिएका कतिपय भिडियो हरु अन्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका हुन्छन् त्यस्तै एउटा भिडियो तपाईंहरू माझ पस्किएका छौं ।
यो भिडियो टिक टक नेपाल नामको युट्युब च्यानल मा राखिएको छ । जुन भिडियो २ करोड ६० लाख बढीले हेरेका छन् ।उक्त भिडियोमा एक युवतीले लगाएको कपडालाई कसरी फेसन दिन सकिन्छ भनेर देखाएकी छिन् । २ लाख १२ लाईक भएको सो भिडियोमा २५ हजार डिसलाइक १८ सय कमेन्ट छन् ।
Prevशक्तिशाली भूकम्पको धक्का महसुस
Nextहिजो मैले छोएको पानी नखाने मान्छेले आज मैले दिएको औषधि खालान त ? डा. राम जी को कथा
रिन लागेरकोले १८ मोडलेको बाईक मात्र रु १ लाख ९ हजारमा किन्नेले सम्पर्क गर्नुहोला